४ मिनेट ढिला हुँदा उड्न नपाएपछि क्याप्टेन बिजय लामाको यस्तो आक्रोश – Rastriyapatrika
४ मिनेट ढिला हुँदा उड्न नपाएपछि क्याप्टेन बिजय लामाको यस्तो आक्रोश
काठमाडौं, २० चैत्र । कूल २७६ जना यात्रु चढेको नेपाल एयरलाइन्सको आरए २३१ नम्बरको जहाज मंगलबार राति दुबई उडानका लागि तयारी भयो । उक्त उडानका लागि सबै यात्रुलाको बोर्डिङ पनि गरियो। नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज साढे ८ ह्यांगरबाट निकालेर पार्किङ वेमा लिइयो । त्यसलगत्तै क्याटरिङ आइटम जहाजमा बोर्ड गरियो र यात्रुलाई पनि जहाज चढाइयो ।
९ बजेर ३५ मिनेट जाँदा यात्रु सबै चढिसकेर जहाजमा इन्धन भर्ने काम पनि सकियो ९ स्३७ मा। इन्जिनियरिङ क्लिरेन्स पाएपछि ९स्४५ मा जहाजका सबै ढोका बन्द भए र यात्रुहरु जहाज उड्ने पर्खाइमा रहे ।
‘क्याप्टेनले जहाजमा प्यासेन्जर बोर्ड भइसकेको र केबल चार मिनेटमात्र थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए तर पनि विमानस्थलले दिएन’ लामो भने,‘यसो हुँदा एकातिर दुबई जाने भनेर जहाज चढिसकेका यात्रुहरु एकातिर मानसिक तनाबमा परे अर्कोतिर हामीलाई पनि क्षति भयो ।’
जहाज ह्यांगरबाट तानेर ल्याउन दिने, प्यासेन्जर बोर्ड पनि हुन दिने तर चार मिनेट समय नदिएर विमानस्थलले राष्ट्रिय ध्वजाबाकमाथि अन्याय गरेको लामाको भनाइ छ ।
‘१० बजे विमानस्थल बन्द हुँदैछ भन्ने थाहा पहिलै थियो त्यहीअनुसार कि पहिलै बोर्ड हुन किन दिएको? दिइसकेपछि २ देखि ४ मिनेटको समय पनि दिननसक्ने? विदेशी एयरलाइन्सलाई जसरी पनि समय मिलाउने अनि हामीलाई वास्तै नगर्ने?’ लमाले भने,‘यसरी नेपाल एयरलाइन्समाथि चौतर्फी हमला हुने हो भने हामी कसरी अघि बढ्ने हो?’